डा. सशांक कोइराला « रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: डा. सशांक कोइराला
काँग्रेस कार्यसम्पादन समितिमा तीन कोइराला
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा कोइराला परिवारका सदस्य पहिलोपटक विभाजित छन् । केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिएर
शेखरको निष्कर्षः कोइराला परिवार एक बनाउन नसक्दा पराजय
काठमाडौं, १२ पौष । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई सुजाता कोइरालाले पटक पटक भेटी परिवार मिल्ने विषय राखिन् । उनले सुरुमा परिवार मिलेपछि आफ्नो समूह पनि बलियो हुँदै आउने
सशांकले भनेः म कुनै पक्षमा छैन
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले आफू कुनै पनि पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफू कुनैपनि समूहको पक्षमा नरहेको बताएका हुन् । ‘म कुनै
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको संस्थापनइतरको बैठक एक कदम अघि बढेको छ । आज पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बसेको बैठकमा सहमति नबनेपनि सकारात्मक दिशातर्फ बढेको छ । बैठकमा
तीन कोइरालाबीच शक्ति बाँडफाँडमा सकस, कस्को चाहना के ?
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाली काँग्रेसभित्र इतिहास बोकेको कोइराला परिवारका तीन सदस्यबीच शक्ति बाँडफाँडमा सकस देखिएको छ । महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु सुजाता कोइराला र डा. शेखर कोइराला
कोइराला परिवार एक होलान् ?
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा हिजोबाट नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छ । काँग्रेसको राजनीतिमा प्रभाव बनाउँदै आएको कोइराला परिवार एक बनाउन प्रयास बन्यो । महामन्त्री डा.
सिंह-कोइराला टकराव बढ्यो
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाली काँग्रेसभित्र महामन्त्री डा. सशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहका यी दुवै नेताबीच दूरी बढेको छ ।
देउवाको मुख्य प्रतिष्पर्धी को ?
काठमाडौं, १८ भदौ । नेपाली काँग्रेसको आजबाट सुरु वडा तहको अधिवेशनसँगै १४औं महाधिवेशनको माहोल तयार भएको छ । वडा तहबाटै जतिसक्दो बढी प्रतिनिधि जिताएर पकड बलियो बनाउने नेताहरु सक्रिय भएका
देउवालाई १४औं महाधिवेशन कठिन, यी नेताबाट चुनौती
काठमाडौं, १० भदौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १४औं महाधिवेशन सजिलो नहुने भएको छ । उनलाई पार्टीभित्र ठूलो चुनौती आउन सक्ने देखिदैछ । भदौबाट प्रक्रिया सुरु
भदौमा काँग्रेस महाधिवेशन नहुने, सशांकले गरे मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव
भरतपुर, २२ साउन । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन भदौमा नहुने निश्चित भएको छ । काँग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले आज त्यसको खुलासा गरेका हुन् । उनले मंसिरसम्म सम्पन्न हुने गरी
काँग्रेसबाट यी सांसद मन्त्री बन्दै
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सबै पक्षलाई मिलाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. सशांक
देउवाइतर समूहको बैठकमा को को सहभागी
काठमाडौं, २५ असार । नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाइतर समूहको बैठक चलिरहेको छ । वत्तीसपुतलीमा जारी बैठकमा सभापतिका आकांक्षी नेताहरुसहित सहभागी छन् । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.